Kusafara Newanano Yenyu | Mazano Okubatsira Mhuri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
Musati maroorana, iwe nemumwe wako maiita sokuti mune zvakawanda zvamunowirirana. Asi zvino, panzvimbo pokunakidzwa nemba, mava kuita sevasungwa nemhaka yokuti zvamaifungidzira kuti wanano yenyu ichange yakaita hazvisizvo zviri kuitika.
Zvinoita kuti munatsiridze ukama hwenyu. Asi chaunofanira kutanga kuziva ndechokuti zvii zviri kukonzera kuti musawirirane. *
Wava kunyatsoona zvinhu sezvazviri. Kuenda kubasa, kutarisira vana, uye zvinoitwa nehama dzemurume, zvinogona kuvhiringa mufaro wemba yenyu. Kunewo matambudziko anongomuka anogona kuvhiringa wanano akadai seemari kana kutarisira womumhuri ari kurwara.
Zvausingawirirani nomumwe wako zvinoita sekuti hazvigadzirisiki. Mukomana nemusikana pavanenge vachiri kupfimbana, vanogona kusazvitora senyaya hombe kana vakasawirirana pane chimwe chinhu. Asi pavanoroorana, vanozoona kuti vakasiyana chaizvo muzvinhu zvakadai sematauriro, mashandisiro emari uyewo mukugadzirisa zvinenge zvanetsa. Kusiyana kuri pakati pavo kwavaisimboona sechinhu chidiki kunenge kwava nyaya hombe.
Hausisina hanya nemumwe wako. Kana kutaura, kuita zvinorwadzisa mumwe uye kusagadzirisa kusawirirana kwamunenge munako zvikaramba zvichiitika, zvinogona kuita kuti murume kana mudzimai asave nehanya nomumwe wake. Uye chakatoipa ndechokuti zvinogona kuita kuti atange kuwirirana nomumwe munhu waasina kuroorana naye.
Waitarisira zvakawandisa. Vamwe vanhu vanopinda muwanano vaine pfungwa yokuti vawana munhu akagara anzi ndewavo. Kunyange zvazvo mafungiro akadaro achinakidza, ane ngozi. Panongotanga matambudziko, pfungwa yokuti munhu wandakawana “ndiye chaiye” inobva yanyangarika, zvoita kuti ufunge kuti wakakanganisa kusarudza.
Nyanya kufunga nezveunhu hwakanaka hwemumwe wako. Edza izvi: Nyora pasi unhu hutatu hwakanaka hune mumwe wako. Chengeta zvawanyora, zvimwe kuseri kwekapikicha kenyu kemuchato kana kuti mufoni yako. Gara uchitarisa zvawakanyora, kuti urambe uchiyeuka zvakaita kuti ude kuroorana nemumwe wako. Kunyanya kufunga nezveunhu hwakanaka hwemumwe wako kunoita kuti muve norugare uye zvichakubatsirai pakugadzirisa kusawirirana kwamunoita.—Zvinotaurwa neBhaibheri: VaRoma 14:19.
Rongai kuva nenguva yokuva pamwe chete. Muchiri mukomana nemusikana maiita zvekutoronga kuti muve nenguva yokuita zvinhu zvenyu pamwe chete uye mainakidzwa. Madii kuita izvozvo? Rongai kuti muve nenguva dzamunenge muri vaviri sezvamaiita muchiri mukomana nemusikana. Izvi zvichaita kuti muwedzere kudanana uye zvichakubatsirai kugadzirisa matambudziko anomuka muwanano yenyu.—Zvinotaurwa neBhaibheri: Zvirevo 5:18.
Udza mumwe wako zviri mumwoyo mako. Kana wagumburwa nemashoko kana nezviito zvemumwe wako, zvinoita here kuti ungosiyana nenyaya yacho? Kana usingagoni usaite zvinoitwa nevana zvekungonyararira mumwe wako wakafundumwara. Kana zvichiita, ibva wataurirana naye zuva iroro asi uchizviita wakadzikama.—Zvinotaurwa neBhaibheri: VaEfeso 4:26.
Kana wagumburwa nemashoko kana nezviito zvemumwe wako, zvinoita here kuti ungosiyana nenyaya yacho?
Ziva kuti zvauri kufungira mumwe wako zvinogona kunge zvakasiyana nezvaanga achifunga. Kazhinji kacho, pauviri hwenyu hapana anenge aine chinangwa chokurwadzisa mumwe. Ita kuti mumwe wako azive izvi nokunyatsokumbira ruregerero pakumurwadzisa kwaunogona kunge waita. Chibvai makurukura kuti zvii zvamungaita kuti musazorwadzisane. Itai zvinotaurwa muBhaibheri zvokuti: “Itiranai mutsa, muchinzwirana tsitsi kwazvo, muchikanganwirana nomwoyo wose.”—VaEfeso 4:32.
Usatarisire zvakawandisa. Bhaibheri rinoti vaya vanoroorana “vachava nedambudziko munyama yavo.” (1 VaKorinde 7:28) Paunosangana nematambudziko muwanano usabva wakurumidza kufunga kuti wakakanganisa pakusarudza wokuroorana naye. Asi, shandai pamwe chete pakugadzirisa kusawirirana kwamunenge munako uye “rambai muchishivirirana nokukanganwirana nomwoyo wose.”—VaKorose 3:13.
‘Ita zvinhu zvinoita kuti pave norugare.’—VaRoma 14:19.
“Fara nomudzimai wouduku hwako.”—Zvirevo 5:18.
“Zuva ngarirege kuvira makatsamwa.”—VaEfeso 4:26.
ITA ZVAWAKATAURA PAMHIKO YOMUCHATO
Uchiri kuyeuka here mhiko yawakaita pamuchato? Wadii kuidzokorora, wozvibvunza kuti, ‘Zvandinoita zvichiri kuenderana nezvandakavimbisa here?’ Edza kusanyanya kufunga zviri kukanganiswa nemumwe wako. Iwe ndiwe wakataura mhiko yacho uye ndiwe wakati uchazviita. Kana mose mukaita zvinoenderana nezvamakapika, mose muchanakidzwa.